'Habeenka Aqalgalka: BBC Carabi oo la hadashay afar dumar oo guurkoodu burburay habeenkii ugu horreeyay - BBC News Somali
'Habeenka Aqalgalka: BBC Carabi oo la hadashay afar dumar oo guurkoodu burburay habeenkii ugu horreeyay
Aroosyada waxaa lagu garanayaa in aad loo xiiseeyo daafaha calamka oo dhan, balse dumarka ku nool qeybo ka mid ah dunida waxaa niyadjab iyo habeen aan la ilaawi doonin ah "xafladaha waaweyn" - waxaana sabab u ah fikrdo la aaminsan yahay.
Hoos waxa ku qoran sheekada dumarkaas oo da'doodu ay kala duwan tahay oo ka hadlaya sida arooskii farxadda ahaa uu isugu rogay musiibo.
Somaya - Waa 23 sano jir
Waxay ahayd habeenkoodii ugu horreeyay ee guurka, kaas oo loo garanayo "habeenka aqalgalka", xilligaas oo wax kastaa ay burbureen ka dib markii uu ka shakiyay "gabarnimadeeda".
Laakiin habeenkii aqalgalka, Somaya waxay la kulantay layaab iyo amakaak. Seygeeda cusub, si xamaasad leh, isagoo aan siin fursad ay ku nasato ayuu ku booday, wuxuuna u sheegay in xamaasadda jaceylkooda ay tahay".
"Waan soo dhoweeyay", ayey tiri Somaya, "inkastoo aan daalnaa, dhib ma sheegan".
'Galgaceyl si degdeg ah ku kala daatay'
Waxay u muuqatay in galgaceylkii la isu qabay uu si degdeg ah ku burburay. Waxaa is bedelay wejigiisa iyo xita midabkiisa. Waxay u sharaxday in aysan ka shakisanayn "in aysan bikro ahayn" iyadoo ka jawaabeysay su'aal uu weydiiyay.
Iyadoo sharaxeysay siduu seygeeda u falceliyay, Somaya waxay tiri "Siduu ii eegayay waxay la mid ahayd qof dagaal igula jira. Wuu i dilay isagoo aan is ogeyn".
"Xitaa iskuma uusan deyin in uu ila hadlo. Waxaan dareemay in la i deyriyay, sida qof dacwad maxkamadeed ay ku socoto. Guurka ka hor, waxaan ka wadahadalnay arrimo bdan," ayey tiri. "Xitaa habeenkii aqalgalkeena oo aan filayay in uu noqdo midkii ugu wanaagsanaa".
"Waxaan islaha wax badan ayad iska garaneysaan labadiina. Balse waxaas oo dhan way baabe'en markii "bikronimo meesha laga waayay'."
Ninkeeda wuu neefsaday wuuna dhoollacadeeyay, Balse wakhtiga wuu ku dhammaaday. Somaya waxay go'ansatay in sida ugu dhaqsaha badan loo furo.
"Seygeyga wuxuu la mid yahay qof aynaan is aqoon. Waxan aad uga carooday in uu aaminay waxa bulshada ay dhaqan ka dhigatay. Ma saadaalin karin waxa xiga ee dhici kara. Wax kasta waa la filan karay. Shaki ma gelin karin badqabkeyga iyo la noolaanshaha qof il-biriqsiyo ku baabi'iyay xiriirkeenii sanadaha soo socday".
Jaceyl iyo Is rabitan la'aan
Dhowr bilood ka dib, Somaya ninkeeda ayey u sheegtay in ay dooneyso in uu furo, waxayna u xaqiijisay in go'aankeeda aysan ka noqoneyn, ayna nafteeda u baqeyso, sababtoo ah ma jirin jaceyl ama is rabitaan wixii ka dambeeyay habeenkii koobaad.
Waxay sheegtay: "In uu argagaxay, sababtoo ah wuxuu dareemay in nin ahaan uu xaq u leeyahay in uu su'aalo xaaskiisa wixii horey ay u soo sameysay".
"Wuxuu ii sheegay inuusan i furi doonin, wuxuuna igula taliyay in aan ka fakaro 'ficilladeyda' iyo in ay sababi karaan 'shaleyto iyo qoomamo'."
Jumanah - waa 45 sano jir
"Waxaan ahaa 19 sano jir markii aabehey uu go'aansaday in uu ii guuriyo ina aderkey, anigoo diidan."
"Ma dooneynin. Waxaan jeclaa in aan waxbarto, balse waxay isku deyeen in ay iga dhaadhiciyaan in uu yahay ninka saxda ah ee aan guursado, ugu dambeyna aan isla qabsan doonno. Jaceylka wuu dambeeyaa, ayey igu dheheen".
"Wuxuu xiray albaabka, wuxuuna igu dhahay is boobsii, iyadoo weli ay dadkii bannaanka joogaan si xaqiijin ay u helaan".
"Waxay ahayd arrin laga naxo," ayey tiri. "Seygeyga ilama uusan hadlin, balse wuxuu doonayaa in shaqadiisa uu dhameysto, inakstoo aniga aan baqayay, madaxana lulayay".
Jumanah waxay inta ku dartay "inkastoo aan walwalsanaa, jirkaygana i xanuunayay, ninkeyga ujeedadiisa oo dhan waxay ahayd in uu dhiig arko."
"Caadi ayaan iska ahaa habeenkaa, markiiba seygeyga wuu demay, oo maba uusan hadleyn habeenkaas: 'dhiig ma lahan!' kuma soo noqon karo meeshaas. Indhihiisa waxay la mid ahaayeen dhuxul markasta i gubi karta."
"Waxaan xasuustaa dhakhtarka oo talo siiyay sida inuu aabahey yahay," ayey tiri. "Wuxuu ii sheegay in aanan ka sheekeyn waxa uu seygeyga sameeyay".
Jumanah waxay sheegtay in lagu qasbay in ay la noolato "ninkii dadka hortooda ku ceebeystay," sababtoo ah qoyskeeda iyo dadka ka agdhowba way diideen in ay taageeraan go'aankeeda ahaa in la furo ee ay dalbatay isla habenkaa, ayna raadineysay muddo 20 sano ah".
Mudaddaas 20-ka sano waxay u dhashay afar canug, Jumanah intaa oo dhan ma aysan ilaawin "ceebtii" habeenkaas ay dareentay.
"Hadda waan faraxsanahay," ayey tiri. "Sababtoo ah waan sitaa labadeyda gabdhood. Ninkeyga ma ahan waxa aan furay; waa bulshada oo dhan oo aan caddaalad ii sameyn."
"Waan aminay, waana jeclaa. Mar aan kullannay ayey si lama filaan ah wax noo dhexmareen, waxaana baaba'day gabarnimadeyda.
"Bulshadeenna, dood lagama galayo ciqaabta ay mareyso gabadha looga ciyaaro gabarnimada," ayey tiri. "Go'aanka ugu dambeeya waa 'dil'."
"Nasiib wanaag, saaxiibteyda ayaa i caawiyay. Waxay igula talisay in aan dhakhtar u tago oo dib loo soo celiyo."
"Haddii qalliinkaas aan la igu sameyn lahayn, Mar hore ayaa la i dili lahaa."
waxay tiri,: "Maalintaa waxay musiibo u ahayd hooyadeey. Ma aysan garaneyn waxa la sameyn karo. Ka dib markii ay la tashatay seddaxdeyda habaryar, dhakhtar dib u soo celiya ayaa la ballamiyay. Qalliinka noocaas ah gebi haantiisaba waa sir, maadaama dalka oo dhan aan laga ogoleyn. Sababtoo ah dadka oo dhan ma aysan aamini lahayn in aan kufay, waxaana shaki la gelin lahaa nolosheyda oo dhan."
Hay'adda u doodda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch waxay dhalleeceysay dowladda Indonesia iyo dalalka qaar ee carabta oo ay ku eedeysay arrintaas in ay sameeyaan.
Baaritan ay BBC sameysay ayaa lagu ogaday in Hindiya, Afghanistan, Bangladesh, Iraan, Jordan, Libya, Masar, Morocco iyo dalal kale oo carab ah iyo Koonfurta Afrika kuwa ku yaalla - in liiska ay ugu kor mareen.
Dalalka ugu badan waxaa ka mid ah Masar, Morocco, Jordan iyo Libya, sida ay sheegtay hay'adda Human Rights Watch.
“Waxaan ahay nin, dumarkana waan ka umuliyaa”
21 Jannaayo 2019